Rahoviana ny Faran’izao Tontolo Izao Araka ny Faminanian’ny Baiboly?
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Chitumbuka Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Luvale Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Ourdou Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tok Pisin Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
Ny Faran’izao Tontolo Izao
Milaza ny 1 Jaona 2:17 fa “mandalo izao tontolo izao sy ny faniriany.” Midika izany hoe hifarana izy io indray andro any. Inona io “tontolo” io? Rahoviana izy io no hifarana ary amin’ny fomba ahoana?
Inona ilay “tontolo” hifarana?
Manana ‘faniriana’ io tontolo io, ka azo antoka fa tsy ny tany ara-bakiteny mihitsy. Manondro ny fitambaran’ny olona mitsangan-ko fahavalon’Andriamanitra kosa izy io. (Jakoba 4:4) “Hiharan’ny sazy vokatry ny didim-pitsarana” ireo olona ireo, izany hoe ‘ho ringana mandrakizay.’ (2 Tesalonianina 1:7-9) Hiaina mandrakizay kosa izay mankatò an’i Jesosy Kristy ka tsy manaiky ho “anisan’izao tontolo izao.”—Jaona 15:19.
Hoy ny tapany farany amin’ny 1 Jaona 2:17: “Izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay.” Hiaina mandrakizay eto an-tany tokoa izy ireo, satria hoy ny Salamo 37:29: “Ny olo-marina no handova ny tany, ka honina eo mandrakizay.”
“Aza tia an’izao tontolo izao na ny zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy tia an’izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray.”—1 Jaona 2:15.
Amin’ny fomba ahoana no hifaranan’ilay tontolo?
Zavatra roa no hitranga. Horavan’Andriamanitra aloha ny fivavahan-diso, izay oharina amin’ny mpivaro-tena atao hoe “Babylona Lehibe.” (Apokalypsy 17:1-5; 18:8) Milaza ho tsy mivadika amin’Andriamanitra izy io, nefa miray petsapetsa amin’ny mpitondra ara-politika. Ireo ihany no hifotitra aminy. “Hankahala an’ilay mpivaro-tena” izy ireo “ka handroba izay ananany rehetra sy hampitanjaka azy, ary hanapitra ny nofony [na ny harenany] sy handoro azy tanteraka amin’ny afo.”—Apokalypsy 17:16.
Aorian’izay Andriamanitra dia handringana an’ireo mpitondra ara-politika, na ny “mpanjakan’ny tany rehetra misy mponina.” Horinganina miaraka amin’ny olon-dratsy rehetra izy ireo amin’ny “adin’ilay andro lehiben’ilay Andriamanitra Mahery Indrindra”, izay antsoina koa hoe “Hara-magedona.”—Apokalypsy 16:14, 16.
“Mitadiava an’i Jehovah ianareo mpandefitra rehetra amin’ny tany. ... Katsaho ny fahamarinana, katsaho ny fandeferana. Angamba ho voafina ianareo amin’ny andro fahatezeran’i Jehovah.”—Zefania 2:3.
Rahoviana ny faran’izao tontolo izao?
Ho tonga ny farany rehefa notorina eran-tany ny Fanjakan’Andriamanitra, ka efa ampy ny fampitandremana ny olona. Io Fanjakana io no hisolo ny fitondran’olombelona. (Daniela 7:13, 14) Hoy i Jesosy Kristy: “Hotorina maneran-tany ity vaovao tsaran’ilay fanjakana ity, ho vavolombelona amin’ny firenena rehetra, vao ho tonga ny farany.” (Matio 24:14) Manao ny rariny sy mamindra fo Andriamanitra matoa asainy torina ny vaovao tsara. Ny asa fitoriana dia anisan’ny “famantarana” fa efa akaiky ny farany. Eo koa ny ady maneran-tany, ny horohoron-tany, ny mosary, ary ny aretina.—Matio 24:3; Lioka 21:10, 11.
Tsy ny zavatra hitranga eran-tany ihany no nolazain’ny Baiboly mialoha, fa ny toetran’ny olona koa. Resahin’ny 2 Timoty 3:1-5 hoe ‘amin’ny andro farany, dia hisy fotoan-tsarotra tsy mora setraina. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, tsy hankatò ray aman-dreny, tsy hahafehy tena, ho masiaka be, tsy ho tia ny tsara, ho tia fahafinaretana fa tsy ho tia an’Andriamanitra.’ *
Hifarana tsy ho ela ity tontolo ratsy ity. —1 Jaona 2:17.
Nanomboka tamin’ny fotoanan’ny Ady Lehibe I, tamin’ny 1914, no tena nitranga ireo rehetra ireo. Nanomboka tamin’io taona io koa no notorina eran’ny vazan-tany efatra ny Fanjakan’Andriamanitra. Ny Vavolombelon’i Jehovah no tena fantatra hoe manao an’io asa io, ary raisin’izy ireo ho voninahitra lehibe izany. Na ilay gazety tena fampiasan’izy ireo aza mitondra ny lohateny hoe Ny Tilikambo Fiambenana Manambara ny Fanjakan’i Jehovah.
“Koa miambena hatrany àry, satria tsy fantatrareo na ny andro na ny ora.” —Matio 25:13.
^ feh. 14 Raha mila fanazavana fanampiny, dia jereo ny toko 9 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly? Navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io ary azo alaina ao amin’ny www.jw.org/mg.
Efa Tena Akaiky ny Farany
Jereo ato fa ny toetran’ny olona amin’izao no amantarana hoe efa tena akaiky ny fara andro, araka ny lazain’ny Baiboly.
Inona no lazain’ny Baiboly momba ny fara andro? Ho gaga ianao hahita fa tsy mitovy amin’izay lazain’ny olona izany.
Mety Tsy ho Araka ny Ieritreretanao Azy ny Fara Andro